प्राकृतिक ‘भ्यु प्वाइन्ट’ खोपारा ! – Saurahaonline.com
प्राकृतिक ‘भ्यु प्वाइन्ट’ खोपारा !
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ मा पर्ने खोपारा लेक भौगोलिक मात्र होइन प्राकृतिक र जैविक रुपमा पनि मनमोहक छ । समुद्री सतहदेखि तीन हजार ६६० मिटर उचाइमा अवस्थित खोपारालाई प्राकृतिक ‘भ्यू प्वाइन्ट’ नै भन्न सकिन्छ ।
“नागबेली परेर फेदीमा बगेको कालीगण्डकीदेखि हिमालको दृश्य देखिने दुर्लभ स्थानमध्ये एक हो खोपारा” यहाँस्थित सामुदायिक लजमा बिगत एक वर्षदेखि कार्यरत पाउद्वारका आदेश तिलिजा बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार खोपाराबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यका साथै म्याग्दी, पर्वत र कास्कीका कैयौँ पहाडी बस्ती पनि देख्न सकिन्छ । खोपाराभन्दा तलको क्षेत्रमा हरियाली जङ्गल छ भने माथिल्लो क्षेत्र नाङ्गो पाखो । वडा सदस्य धनबहादुर पाइजा पुनले यस क्षेत्रमा १७५ प्रजातिका बनस्पति पाइने जानकारी दिनुभयो ।
‘‘वर्षातको मौसममा बुकीमा धेरैथरि फूल फुलेर रङ्गिचङ्गी देखिन्छ’’, उहाँले भन्नुभयो ‘‘हिउँदमा हिउँले छोपिने खोपारा वसन्त ऋतुमा पाखाभरि ढकमक्क फूल्ने लालिगुराँसले मनमोहक देखिन्छ ।’’ भिरालो हरियाली घाँसे मैदानको पृष्ठभूमिका हिमालहरुको दृश्य बिहान १०–११ बजेपछि बादलको घुम्टोभित्र लुक्छ । छिन–छिनमा बादल र कुइरो घुम्टो ओडेर लुकामारी खेल्ने गर्दछन् । प्रभातकालीन समयमा हिमाल र खुलेको निलो आकाश देख्दा आँखा चिम्लन मन नलाग्ने बेनीबाट खोपारा भ्रमणमा गएका सिजन शाहीले अनुभव सुनाउनुभयो । ‘‘हिमालको पृष्ठभूमिमा चाँैरी, भेडा र घोडाको बनाथ चर्दै र खेल्दै गरेको दृश्य पहिलो पटक यहाँ आएर देखेँ,’’ शाहीले भन्नुभयो ‘‘यहाँको रमणीय दृश्य र शान्त वातावरणले मोहित बनायो ।’’
खोपाराभन्दा तलको खोँचबाट जहाज र हेलिकोप्टर मुस्ताङ ओहोर–दोहोर गरेको दृश्य कम लोभलाग्दो हुदैन । खोपारा लेकसम्म पुग्न नाकै ठोक्किने उकालो, तल हेर्दा रिँगटा लाग्ने अक्करे भिरको यात्रा गर्नुपर्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा उकालो यात्राको दुःख र थकाई मेटिएको बेनीका सज्जन हमालले अनुभव सुनाउनुभयो । खोपारा र आसपासका क्षेत्रमा पाउद्वार मावि र हिमाञ्चल माविका निजी स्रोतका शिक्षकको तलब जुटाउन डेढ सयभन्दा बढी चौँरी पालिएको छ । पाउद्वार गाउँका सात वटा भेडा गोठको चरन क्षेत्र पनि खोपारा वरपर नै हो । पछिल्लो समय यहाँ भैँसी र गाइको गोठ भने लैजान छोडिएको छ ।
चरन क्षेत्रमै ब्याएका भैँसीका पाडापाडी चिप्लीएर तल झर्ने र त्यसलाई खोज्न जानुपर्ने भएका कारण परापूर्व कालमा यस ठाउँलाई “खोपारा” नामाकरण गरिएको स्थानीय बताउँछन् । पछिल्लो समय यो ठाउँलाई खोप्रा भनेर प्रचार भइरहेको छ । पाउद्वार देखि खोपारा जाने बाटोमा विभिन्न मण्डलीका थान छन् । स्थानीयबासीको धार्मिक आस्था भएका मण्डलीका थानसँग ग्रामीण कृषि, गोठाला र शिकारीहरुका कथा जोडिएका छन् ।
तर सहरी क्षेत्रबाट जन्मथलोमा फर्किएका र जिल्लाभित्रकै मानिसहरुले घुमघामका लागि खोपारा रोज्न थालेका छन् । सामाजिक अभियन्ता महाबीर पुनको अगुवाइ र अवधारणाअनुसार सञ्चालित अन्नपूर्ण धौलागिरी सामुदायिक पर्यावरणीय पदमार्गमा खोपारालाई समेटिएको छ । खोपाराको रिपीटर टावरबाट पुनले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङ जिल्लाको दुर्गम बस्तीमा तार रहित इन्टरनेटको सञ्जाल फिँजाउनुभएको छ । दुर्गम भए पनि आधुनिक सूचना प्रबिधिमा रमाउन पाउनु खोपाराको अर्को बिशेषता हो ।
खोपारा घुम्न जानेहरुलाई खाने बस्ने सुबिधाका लागि सामुदायिक लज सञ्चालन भएको छ । करिब दश वर्ष पाउद्वार र हिमाञ्चल माविमार्फत् सञ्चालित सामुदायिक लजलाई गत मङ्सिरदेखि पाउद्वार पर्यटन सहकारी संस्था मातहत ल्याइएको छ । यो लजको क्षमता २४ जनाको छ । सहकारीमार्फत सामुदायिक लजका साथै पाउद्धारमा घरबास (होमस्टे) र तातोपानी कुण्ड–भालखरा–खोपारा–खयर–खोपारा–लेरेनी–पाउद्वार जोड्ने नयाँ पदमार्ग सञ्चालनको तयारी गरिएको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष राजेश तिलिजाले बताउनुभयो ।
घोस्केखोर लघुजलबिद्युत परियोजनाबाट खोपारा, ढाडखर्क र बयलीको सामुदायिक लजमा बिद्युत आपूर्ति गराइएको छ । पुराना पदमार्ग सडकमा परिणत भएपछि खोपारालाई नयाँ गन्तब्य बनाउन समुदाय र स्थानीय तहले चासो दिएका छन् । अन्नपूर्ण गाउपालिकाको रु दश लाख बजेटबाट पाउद्वार देखि खोपारा हँुदै खयर जाने विभिन्न ठाउँमा ८२० मिटर पदमार्ग निर्माण भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेश पुर्जाले बताउनुभयो । थप दश लाख बजेटबाट ढाँडखर्क हुँदै खोपारा जोड्ने पदमार्ग निर्माण शुरु भएको छ ।
बेलायती सेनाको जागिरबाट सेवानिवृत्त भएपछि ६८ वर्षीय पुन विगत ९ वर्षयतादेखि खयरभारानीको सेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ । उकालो र चिप्लो तथा भिरको बाटो भएकाले दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ढुंगासहितको सिँढी निर्माण गरिएको छ । पदमार्गको ठाउँ गाउँमा विश्राम गर्ने चौतारी बनाइएको छ । पदमार्ग, सामुदायिक लज, खानेपानी र आश्रयस्थलको सुबिधा भएपछि खोपारा र खयरभारानीको पर्यटन विकासमा मद्दत पुगेको छ । स्थानीयको सक्रियतालाई मुर्तरुप दिन गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको कोषका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । रासस